🥇 Njikwa oche enyemaka
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 710
Vidiyo nke njikwa oche enyemaka
Nye iwu njikwa oche enyemaka
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụla omenala ịmegharị njikwa Desk Enyemaka iji soro usoro na arịrịọ ọrụ dị ugbu a nke ọma, hazie akụrụngwa, guzobe usoro ndị ọrụ, na ịkwadebe akụkọ na akwụkwọ iwu na-akpaghị aka. Njikwa akpaaka na-enye ohere n'otu oge nyochaa ọrụ Desk Enyemaka niile, mejupụta akụrụngwa n'oge, chọọ ndị ọkachamara n'efu ma ọ bụ zụta akụkụ ụfọdụ na akụkụ mapụtara, guzobe mmekọrịta na-ekwe nkwa na nke bara uru n'etiti ndị ahịa.
Ruo ogologo oge, USU Software System (usu.kz) na-emepụta ihe ngwọta ngwanrọ na usoro enyemaka enyemaka nke na-enye gị ohere ịchịkwa arịrịọ nke ndị ọrụ na ụlọ ọrụ, ọrụ na nkwado teknụzụ na mpaghara dị iche iche nke IT-sphere. . Ọ bụghị ihe nzuzo na ọnọdụ nke njikwa na-ekpebi nke ukwuu site na ihe mmadụ kpatara. Usoro ihe omume ahụ na-ebelata nhazi nke ndabere a, na-ebelata ụgwọ ọrụ kwa ụbọchị, ma na-ebelata ihe ize ndụ. Ọ dịghị ọrụ a na-ahụghị. Site na ndabara, etinyere modul njikere ozi pụrụ iche. Ndekọ Desk enyemaka nwere nkọwa zuru ezu nke arịrịọ na ndị ahịa, ụkpụrụ na nlele nyocha. Njikwa na-arụ ọrụ nke ihe owuwu ahụ na-egosi nleba anya na-arụ ọrụ nke ọrụ ugbu a mgbe ị nwere ike ịzaghachi ngwa ngwa na obere nsogbu. A na-eme njikwa ozugbo na ozugbo. Ọ bụrụ na ụfọdụ iwu nwere ike ịchọ ihe ndị ọzọ (akụkụ, akụkụ mapụtara, ndị ọkachamara), mmemme na-agwa gị nke a ngwa ngwa. Ndị ọrụ ga-etinye ihe mgbagwoju anya nke ọma, tụọ ọrụ, wee họrọ oge kwesịrị ekwesị.
Site na ikpo okwu Desk Help, ọ dị mfe ịgbanwe ozi, eserese na ederede, faịlụ, akụkọ njikwa, mgbakọ na mwepụ na nyocha. A na-achịkwa akụkụ ọ bụla nke njikwa ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ enyemaka na-enyochakwa okwu nke nkwurịta okwu na ndị ahịa, nke na-eme ka njikwa njikwa dị mma na-akpaghị aka. Ị nwere ike iji modul ozi SMS, kwalite ọrụ ụlọ ọrụ nke ọma, zipu ozi mgbasa ozi, banye na mkparịta ụka gị na ndị ahịa.
Echefula maka nzaghachi nke Desktọpụ Enyemaka. Ọ na-elekwasị anya na njirimara akụrụngwa, mmasị onwe onye, ụkpụrụ nkwado teknụzụ, ihe mgbaru ọsọ ogologo oge, na ebumnuche nke ụlọ ọrụ ahụ setịpụrụ onwe ya ebe a na ugbu a, yana n'oge dị mkpirikpi. Njikwa akpaaka ga-abụ ngwọta kachasị mma. Ọ dịtụbeghị mgbe njikwa nwere ntụkwasị obi na ntụsara ahụ, na-eburu n'uche aghụghọ niile na nuances nke gburugburu ebe ọrụ. Anyị na-atụ aro ka ị buru ụzọ mara ụdị ngosi nke ngwaahịa a, mee ya, ma kpebie na akụrụngwa na-arụ ọrụ.
Mmemme Enyemaka na-enyocha usoro ọrụ ugbu a na nkwado teknụzụ, na-eme njikwa akpaaka maka mmezu nke usoro ahụ, ma ogo ọrụ na oge ya. A naghị eji onye enyemaka eletrọnịkị mee ihe n'iyi oge, gụnyere na ndebanye aha mkpesa ọhụrụ, nhazi akwụkwọ nchịkwa, na ịkọ akụkọ. Site na onye nhazi oge, ọ dị mfe ịchịkwa usoro niile nke mmezu nke arịrịọ na-esote, ka ịgbanwee n'etiti ọrụ. Ọ bụrụ na mmezu nke ụfọdụ usoro nwere ike ịchọ ihe ndị ọzọ, mgbe ahụ ngwanro ahụ na-egosi maka nke a.
Nhazi oche enyemaka na-amasị ndị ọrụ niile na-enweghị ihe ọ bụla. Ọ bụ ngwa ngwa, rụọ ọrụ nke ọma, ma nwee interface enyi na kensinammuo. A na-achịkwa ọkwa mmepụta ọ bụla, nke n'aka nke ya na-enye ohere ịmeghachi nsogbu na ọsọ ọkụ ọkụ, na-ahọrọ ndị na-eme ihe nkiri nke ọma, na nyochaa ọnọdụ nke ego ihe onwunwe. A machibidoro iwu ka gị na ndị ahịa na-akpakọrịta site na modul ozi arụnyere n'ime ya. Ndị ọrụ nwere ike gbanwee ozi ngwa ngwa, faịlụ eserese na ederede, akụkọ njikwa. Usoro enyemaka Desk na-enyocha ma na-enyocha arụmọrụ nke ndị ọrụ, na-edozi oke ọrụ n'ozuzu ya, na-agbalịkwa ịnọgide na-enwe ọkwa ọrụ kachasị mma. Site n'enyemaka nke njikwa akpaaka, ị nwere ike soro ma ọrụ dị ugbu a na usoro ọrụ, yana ebumnuche ogologo oge, atụmatụ mmepe nke otu, nkwalite na usoro ọrụ mgbasa ozi. Awụnyere modul ngosi na ndabara. Ọ dịghị ụzọ dị mfe iji na-etinye mkpịsị aka gị na pulse nke ihe omume mgbe niile. Ịkwesịrị ịtụle ikike ijikọ na ụlọ na ọrụ dị elu. Akụrụngwa dị mma maka ebe ọrụ, ọrụ nkwado teknụzụ, ụlọ ọrụ IT, n'agbanyeghị nha na ọpụrụiche. Ọ bụghị ngwaọrụ niile achọtara ebe na nhazi ntọala nke ngwaahịa ahụ. E gosipụtara ụfọdụ n'ime ha iche iche. Lelee ndepụta nke mgbakwunye akwụ ụgwọ. Ị kwesịrị ịmalite ozugbo enwere ike ịmara ọrụ ahụ ma chọpụta uru ọ bara. Ụdị ngosi dị n'efu. Mgbe ọnọdụ ọrụ nke nzukọ ahụ gbanwere, usoro nke usoro azụmahịa a nakweere na ya nwere ike ghara ịdị irè, nke chọrọ mgbanwe ụfọdụ nwere nzube na usoro a, ma ọ bụ njikarịcha nke usoro azụmahịa. Nkwalite bụ isi ịtụgharị uche na usoro azụmahịa nke ụlọ ọrụ iji nweta nkwalite ndị bụ isi n'ihe ngosi dị mkpa nke ọrụ ha: ọnụ ahịa, ịdịmma, ọrụ na ọsọ ọsọ. Omume na-esote njikarịcha ma na-eduga n'ịbawanye arụmọrụ nke ụlọ ọrụ: ọtụtụ usoro ọrụ na-ejikọta n'ime otu. A na-agbanye usoro ahụ n'ahịrị. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume iweta usoro niile nke usoro ahụ n'otu ọrụ, mgbe ahụ, a na-emepụta otu ndị na-ahụ maka usoro a, nke na-eduga na ụfọdụ nkwụsịtụ na njehie na-ebilite mgbe ị na-ebufe ọrụ n'etiti ndị otu. Ihe ndị a niile nwere ike ibute nsonaazụ ụfọdụ, mana ọ bụghị ndị otu USU Software, ebe ị ga-ahụ mmemme dabara adaba maka ihe kacha mkpa.